Waqtiga uu Furmay shirka wada tashiga beelaha Puntland oo la shaaciyay – Radio Daljir
Waqtiga uu Furmay shirka wada tashiga beelaha Puntland oo la shaaciyay
Maajo 21, 2015 11:57 b 0
Arbaco, May 20, 2015 (Daljir) —Gudiga Qabanqabada shirka Wadatashiga Beelaha Puntland oo galabta shir saxaafadeed ku qabtay Magaalada Garoowe ayaa ku shaaciyey xiliga rasmiga ah ee uu shirku furmayo iyo goobta uu shirku ka dhacayo.
Gudoomiyaha guddiga loo saaray shirka wadatashiga beelaha Puntland Eng.Maxamuud Xaaji Saalax (Biriishkalo) ayaa sheegay shirka in lagu qaban doono magalada Gaalkacyo isla markasna uu furmayo kowda bisha lixaad ee socota, wuxuna sidoo kale sheegay inuu socon doono mudo toban cisho ah.
Arrimaha ugu waa weyn ee shirka looga hadlayo ayuu ku sheegay Maxamuud Xaaji Saalax saddex qodob oo ay ka mid tahay xoojinta isku xirnaanta shacabka Puntland, dib u eegista shirwaynihii lagu dhisay Puntland (1998) iyo waliba xaalada dalka iyo ka hadalka xalinta khilaafaadka.
Saxaafadda ayaa su’aalo ka waydiiyay xaaladda ammaan ee Gaalkacyo maadama shirka lagu qabayo iyo tiradda xubnaha shirka lagu casumay oo kooban, Maxamuud Xaaji Saalax ayaa sheegay shirka in looga hadlayo arrimaha Puntland ayna muhiim ahayn in qof kasta laga qayb galiyo sidoo kale waxa uu arrinta ammaanka ku tilmaamay inay waajibaad ka saaran tahay qof kasta inuu adkeeyo.
Shirka ayaa dhowr jeer hore baaqday, waxaa jira beelo saluugay habka loo qaybiyay xubnaha ka qayb galaya shirka oo tiradooda guud tahay 253 oo Puntland ka kala imaanaya.
Toban barri ka dib ayaa lagu wadaa in shirka uu si toos ah uga furmo Gaalkacyo, inta ka dhimanna waxaa la diyaarinayaa meelihii ay dagi lahaayeen ergadda ka qayb galaysa shirka oo qaarkood ka imaanaya deegaano aad u fog.
Madaxwaynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali (Gaas) ayaa lagu wadaa todobaadka soo socda inuu gaaro magalada Gaalkacyo, kana qayb galo furitaanka shirka.
Dhegeyso:Wasarada waxbarashada Puntland oo Maanta Anbabixisay Kormeerayaasha Imtixaanka guud